चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | गृहपृष्ठ
Home लगानी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
वर्गीकरण : जलविद्युत् कम्पनी
मुख्य कार्यालय : ज्ञानेश्वर, काठमाडौं
स्थापना : २०५२ साल कात्तिक १४
अध्यक्ष : डा. जीवेन्द्र झा
शाखा कार्यालयहरू : १७
विद्युत् प्राधिकरण : ५१ प्रतिशत
प्राधिकरणका कर्मचारी : २५ प्रतिशत
सर्वसाधारण र सङ्गठित संस्थाहरू : २४ प्रतिशत
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको यस कम्पनी २०५२ साल कात्तिक १४ गते स्थापना भई साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि सर्वेक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यमा अगाडि बढिरहको छ । कम्पनीले देशको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ । यसले २०६२ भदौ १२ गते रू. २३ करोड ७४ लाख १० हजारबराबरको साधारण शेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक, प्राधिकरणका कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी तथा कम्पनीका कर्मचारीहरूमा निष्कासन गरेको थियो । यो कुल शेयर सङ्ख्याको २५ प्रतिशत हो । उक्त शेयरको हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भइरहेको छ ।
चिलिमेले आफ्ना योजनाहरूलाई विस्तार गर्नका लागि २३ लाख ४ हजार कित्ता साधारण शेयर २०६६ असार १ गतेदेखि निष्कासन गर्न लागेको थियो, तर स्थानीय बासिन्दाले उनीहरूलाई पनि निश्चित सङ्ख्यामा शेयर सुरक्षित राखिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चको निर्णय बमोजिम उक्त प्रक्रिया स्थगित गरियो । त्यसबेला कम्पनीले प्रतिशेयर रू. एक सय अङ्कित मूल्यमा रू. २ सय २३ दशमलव ७० प्रिमियम थप गरी रू. ३ सय २३ दशमलव ७० मा निष्कासन गर्न लागेको थियो ।
हाल यो कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई बढी प्रभावित र कम प्रभावित दुइ भागमा विभाजन गरी प्रिमियममा र प्रिमियम छूटमा मङ्सिर २८ गतेसम्मका लागि शेयर निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई ९ लाख ६० हजार कित्ता शेयर निष्कासन गरेको छ । निष्कासित शेयरमध्ये ७ लाख ८० हजार कित्ता शेयर प्रिमियमसहित रू. ३ सय २३ दशमलव ७० प्रतिकित्ता तथा बाँकी १ लाख ८० हजार कित्ता प्रिमियम छूट गरी प्रतिशेयर रू. १ सयका दरले निष्कासन गरेको छ । शेयरमा लगानी गर्नका लागि जनता र मेगा बैङ्कले स्थानीय लगानीकर्तालाई ऋण दिने व्यवस्था गरेको छन् । तर, स्थानीय जनतालाई शेयरसम्बन्धी आवश्यक जानकारी नभएकाले शेयर आवेदकहरूको सङ्ख्या न्यून भएको देखिन्छ । जलविद्युत् समूहमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने भनी चिनिएको यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउने निश्चित छ ।
१ सय ८० दिने शेयर मूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा हालका दिनमा यस कम्पनीको शेयर न्यूट्रल जोनमा देखिएको छ । गतवर्षको नोभेम्बर ९ देखि हालसम्मको आरएसआई ट्रेण्ड हेर्दा जुलाई १३ को आसपासमा ओभर सोल्ड जोनमा देखिएको थियो । त्यसपछिको कारोबारमा भने सपोर्ट पाई पुन: न्यूट्रल जोनको स्केल ६५ सम्म पुगेको थियो । अक्टोबर महीनाको अन्तिम समयतिर उक्त रेखाले स्केल ३० लाई र्स्पर्श गरी हाल स्केल ४५ तिर उन्मुख भएको देखिएको छ । हाल देखिएको टे्रण्डअनुसार आगामी दिनमा यो कम्पनीको शेयरमूल्य सामान्य वृद्धि हुने सम्भावना छ । त्यसैले यस कम्पनीको शेयर विक्री गर्न चाहनेहरूले केही समय पर्खनु उपयुक्त हुन्छ भने खरीदकर्ताले ओभरसोल्ड बुलिस रिभर्सल प्यार्टनको प्रतीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणसम्ममा कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ७२ करोड ९६ लाख रहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई हाल निष्कासन गरिरहेको शेयर बन्द भएपश्चात् चुक्ता पूँजी रू. ८२ करोड ५६ लाख हुने तथा र्सवसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि छुट्ट्याएको पूरै शेयर निष्कासन भएपछि रू. ९६ करोड हुनेछ । २०६७/०६८ को अपरिष्कृत प्रथम त्रैमासिक अवधिसम्ममा यो कम्पनीले रू. २३ करोड ३४ लाख खुद मुनाफा कमाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा ४ दशमलव १३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३४ दशमलव २७ प्रतिशतले लगानीमा वृद्धि गरी यो आवको प्रथम त्रैमासिकसम्ममा रू. २२ करोड ८० लाख लगानी गरेको छ । साथै नयाँ योजनाअन्तर्गत कम्पनीले रू. ३ करोड लगानी गरेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई सुधार गर्दै लगेको छ । अन्य समूहको बजार घटिरहेको वर्तमान अवस्थामा जलविद्युत् समूहको शेयरमूल्यमा खासै कमी आएको छैन । कम्पनीले प्रतिशेयर आयमा सामान्य रूपमा र मूल्य आम्दानी अनुपातमा पनि झिनो सुधार ल्याएको छ ।
यस कम्पनीको शेयर नेप्सेमा नियमित रूपमा कारोबार हुने गरेकाले लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा किन्न र बेच्न समस्या छैन । शेयरमूल्यमा उतार-चढावको अवस्थाले गर्दा सट्टेबाजहरूले यस कम्पनीको शेयरमा लगानी गरी सामान्य मुनाफा कमाउन सक्छन् ।
कम्पनीले हाल निष्कासन गरिरहेको शेयर ३ वर्षसम्म बेच्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा सो अवधिसम्म बजारमा शेयर विक्री चाप कम हुने हुँदा शेयर मूल्यमा उत्तार-चढावको सम्भावना कम छ । यो कम्पनीका लगानीकर्ताहरूरुले ३ वर्षसम्ममा राम्रो प्रतिफल पाउन सक्छन् भने त्यो समयसम्ममा यसको शेयरमूल्यमा पनि निकै वृद्धि हुने सम्भावना छ ।
विगतका वर्षमा लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको यो कम्पनीको तेह्रौँ वार्षिक साधारणसभाले आव २०६५/६६ को मुनाफाबाट ४५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । २०६६/६७ को चौधौं वार्षिक साधारणसभाको सम्बन्धमा हाल कुनै सूचना प्रकाशित गरेको छैन । साथै, कम्पनीले चालू आवको प्रतिफल दर पनि निर्धारण गरेको छैन ।